Tag: dib u soo celinta warbaahinta bulshada ee maalgashiga | Martech Zone
Tag: dib u soo celinta warbaahinta bulshada ee maalgashiga
Jimcaha, Sebtember 19, 2014 Khamiista, Sebtember 18, 2014 Douglas Karr
Waxaan ka wada hadalnay caqabadaha lagu cabbiro warbaahinta bulshada ROI waagii hore - iyo qaar ka mid ah xaddidaadaha waxa aad cabbiri karto iyo sida ay saamaynta ugu yeelan karto suuqgeynta warbaahinta bulshada. Taasi maaha in la yiraahdo qaar ka mid ah waxqabadka warbaahinta bulshada laguma qiyaasi karo sax, in kastoo. Halkan waxaa ah tusaale fudud… Maamulaha guud ee shirkadda tweets ee maqaallada hoggaaminta fikirka, jihada shirkadda, iyo bogaadin shaqaalaha khadka tooska ah ka sameeya ee cajiibka
Gabi ahaanba jeclaan fariinta halkan ka timid tafaariiqleyda qiimaha weyn leh ee Koonfur Afrika Woolworths. Tifaftiraha Dijital ah Sam Wilson wuxuu ka hadlayaa sida badeecadaha Socialbakers, Falanqaynta iyo Dhisaha, ay awood ugu siinayaan kooxdeeda inay kaxeyso kaqeybgalka astaanta iyo u gudbinta aragtiyo bulsheed oo awood badan maamulayaasha shirkadda. Istaraatiijiyadda Woolworth ayaa dhaafsiisan dhageysiga iyo ka jawaab celinta warbaahinta bulshada. Waxaa jira 4 cunsur oo kale oo uu xusay Sam oo ka caawiyey inay guuleystaan, dibedda iyo hoggaankooda gudaha. Falanqeyn - helitaanka jeex iyo jajab
Qaar badan oo ka mid ah suuqgeynta internetka iyo xirfadlayaasha warbaahinta bulshada ayaa dhow. Saameynta ku soo noqoshada warbaahinta bulshada ee maalgashiga ayaa aad uga baxsan qasabadaha tooska ah ee wax iibsashada. Istaraatiijiyaddaada warbaahinta bulshada waxay kuu soo saari doontaa dakhli si dadban iyada oo loo marayo dhowr wadiiqo.